Global Voices teny Malagasy » Resadresaka nomerika: Ny fitehirizana ny teny Kadazan antserasera sy ireo fiteny vazimba teratany hafa any Borneo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Mey 2021 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Antsafa, Mediam-bahoaka, Teratany, Teny aziatika an-tserasera, Rising Voices
Sary nomen'i Jeannet Stephen ary nahazoana alàlana.
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Manomboka ny 14-20 aprily 2021 dia handray ny kaonty Twitter ifandimbiasana @AsiaLangsOnline  i Jeannet Stephen, izay manadihady ny fomba fampiasana ny teknolojia hamelomana ireo fiteny Aziatika. Vakio bebe kokoa ato  ny momba ny fanentanana.
Fony nanao ny fanadinana asa-karoka hahazoana diplaoma fianarana ambony i Jeannet Stephen, dia nahita ny fanovana kaody (ny fanao amin'ny fifandimbiasana eo amin'ny fiteny roa na maromaro na karazana fiteny amin'ny resadresaka) ao anatin'ny fianakaviana teratany Kadazan ao Malezia. Amin'ny maha-Kadazan  ny tenany, dia hitany avy hatrany ny zavatra niainany manokana amin'ity “fiteny roa” ity, tamin'izany no nahafantarany ny teny Tangaa’ na ny fiteny Kadazan amorontsiraka, saingy tsy afaka nahay niteny izany izy, toy izany koa ny maro amin'ny olona teo an-toerana. Na dia nahasosotra azy aza ny tsy fahaizany miteny ny fiteniny, dia nanosika azy hanohy hianatra sy hanohana ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny hafa ao amin'ny fanjakana Sabah  any Borneo, Malaysia ihany koa izany.
Miaraka amin'ireo namana mpanolo-tsaina sy mpanohana, nitarika ny fananganana Sampam-pikarohana ho an'ny Fiteny sy ny Mpahay Fiteny Sabah ao amin'ny Oniversite Malaysia Sabah ny fahavononana. Avy eo ny vondrona nanatevin-daharana ny Borneo Research Institute for Indigenous Studies (BorIIS), Ivon-toeram-Pikarohana Fianarana ny Vazimba teratany ao Borneo (BorIIS) amin'ny maha-foibem-piteny sy Haifiteny azy. Mikaroka paikady samihafa ny vondrona mba hamelomana ireo fiteny eo an-toerana. Vao tsy ela akory izay dia nanao webinar niaraka tamin'ny Wikimedia Indonezia sy ny Sampam-pandaminana ny teny Indoneziana amin'ny lohahevitra “Fampaharetana ireo Fiteny Indizeny amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo tetikasa Wikimedia”. Nandraisany anjara ihany koa ny nanabe voho fahalalana ho an'ny Tetikasa ho an'ireo Fiteny Tandindonin-doza momba ny Vaovao COVID-19 amin'ny Fiteny Indizeny, Tandindomin-doza sy zara raha hita  (Endangered Languages Project’s COVID-19 Information on Indigenous, Endangered, and Under-Resourced Languages ), tamin'ny fananganana afisy amin'ny fiteny Kadazandusun, Kadazan, Dusun, Rungus, Kimaragang, Tobilung, Murut, ary Bajau.
Rising Voices (RV): Manao ahoana ny toetoetran'ny fiteninareo ankehitriny ivelan'ny aterineto, sy anjotra?
Jeannet Stephen (JS): Offline, if you go by the Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) , Kadazan is considered as 6b – Threatened. Ethnologue reports the size and vitality of Kadazan as ‘Endangered’ with that red color, which means it is no longer the norm for children to learn and use this language.
Jeannet Stephen (JS): Ivelan'ny aterineto, raha miditra ao amin'ny Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS)  ianao, dia heverina ho 6b – Voarahona ny Kadazan. Lazain'ny etnôlôgy fa ny habeny sy ny fahaveloman'i Kadazan amin'ny maha «Tandindomin-doza» azy amin'io loko mena io, dia midika fa tsy fanaon'ny ankizy intsony ny mianatra sy mampiasa an'io fiteny io.
Hita an-tserasera amin'ny endriny iray na amin'ny endriny hafa izany. Misy vondrona Facebook maromaro izay mampiasa ny foto-kevitra ‘Andao hianatra’, ka ahitana ireo mpikambana mifanohana amin'ny firesahana amin'ilay fiteny. Vao tsy ela akory izay dia nisy fidirana mavitrika an-tserasera avy amin'ny Birao Ara-kolontsaina Sabah ao an-toerana tao amin'ny sehatra media sosialin'izy ireo. Fivoarana tsara izany, indrindra raha mampiditra vondrona ara-pirazanana na fikambanana sy tanora izy ireo. Nahitana endrika anjotra ny gazety teo an-toerana izay manana tsanganana amin'ny vaovao amin'ny fiteny indizeny, saingy mampalahelo fa tsy misy intsony izany. Nijanona tamin'ny herintaona ihany koa ny pejin'ny fiteny vazimba teratany tamin'ny gazety iray mpivoaka isan'andro eo an-toerana.
Fahendrena ara-materialy, raha ny fahitako azy, somary aloha [lavitra] ny Kadazan raha oharina amin'ireo fiteny zanatany hafa, satria efa manana rakibolana vita pirinty maromaro izy io. Misy koa fantsona fampielezam-peo natokana ho an'ilay fiteny.
RV: Inona no heverinao fa fanamby lehibe indrindra atrehin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiteninareo eo amin'ny resaka serasera nomerika na famoronana votoaty nomerika amin'ny tenin-drenin'izy ireo?
JS: Raha ny hevitro, ny fanamby lehibe indrindra angamba dia ny fahazoana fahalianana maharitra [avy amin'ny mpihaino] mba hijery ny votoaty nomerika amin'ny fiteny indizeny, ary mba hazoto hanohy hamorona votoaty nomerika amin'ny fiteny indizeny ireo mpamorona votoaty nomerika.
Marobe ireo mpamorona votoaty nomerika, saingy tsidraindray no ahitana famatrarana [upload] raha topaza-maso ny YouTube. Mino aho fa satria koa mila mpamaky hanao domberina ny votoaty nomerika sy mba hampazoto ireo mpamorona votoaty. Misy tombontsoa avy amin'ireo vondrom-piarahamonina indizeny ve ny mihaino na mahita ny fitenin'izy ireo indizeny anjotra? Izany angamba no fanontaniana ataon'ny vondrom-piarahamonina indizeny amin'ny tenan'izy ireo satria tsy afaka miasa amin'ny zavatra tsy misy (banga) ny fandresen'ny fiteny, mila ny vondrom-piarahamonina indizeny ihany koa isika mba ho liana amin'ny fanaovana ho tompondaka ny fitenin'izy ireo, mba haniry hampaharitra ny fitenin'izy ireo, ary rehefa miara-dia dia hahomby kokoa ny fiarahamiasa na andavanandro na anjotra.
Izany dia [rehefa] miresaka momba ireo mpijery vazimba teratany eo an-toerana isika. Etsy andaniny, tsy tokony hoferana ho an'ireo mpijery eo an-toerana/mpihaino avy amin'ny manodidina anao ihany ny votoaty nomerika. Mety ho mpihaino avokoa ireo [ny] mpiserasera manerantany. Raha ataonao mahaliana ny votoatinao ary ahitana dikantsoratra teny Anglisy (na inona na inona fiteny kendrenao hahazoanao mpijery), hiditra amin'ny votoatinao ireo mpiserasera manerantany.
Rehefa milaza [izany], mila fidirana amin'ny aterineto misosa tsara ireo mpamorona votoaty nomerika, ary indrindra any amin'ireo fianakaviana faritra ambanivohitra izay mbola mampiasa ny fiteny vazimba teratany any an-tranony ho fitenin'izy ireo voalohany. Ka mety ho amin'ny endrika tombontsoa maharitra, fahaizana mandika teny ary koa fidirana amin'ny aterineto ireo fanamby ireo.
RV: Raha ny hevitrao, inona avy ireo dingana tokony raisina mba handrisihana ny fitomboan'ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto?
JS: 1) Fidirana amin'ny aterineto tsara kokoa any amin'ny faritra rehetra. 2) Fampiofanana ho an'ireo mpamorona votoaty any amin'ireo faritra ambanivohitra – angamba manome azy ireo fahana tahiry aterineto (sy fitaovana nomerika, raha tsy manana na inona na inona, ohatra finday raitra). 3) Fampiofanana ho an'ireo mpamorona votoaty mba hampidirana fandikan-teny amin'ny votoatin'izy ireo ho amin'ny fiteny nasionaly na Anglisy. Izany no ataon'ireo mpamorona votoaty nomerika any Indonezia (ohatra akaiky indrindra) rehefa manana votoaty amin'ny tenim-paritra izy ireo. Mampiditra dikantsoratra amin'ny fiteny Bahasa Indonesia izy ireo. Mety ho izay lohahevitra ambany masoandro ny lohahevitra, saingy tsy tokony ho ferana ho an'ireo izay [afaka] miteny ny [fiteny] ihany ireo mpijery. Angamba azo apetraka ny fiarahamiasa eo amin'ireo mpamorona votoaty nomerika (ireo izay mahay ny teknolojia) sy ireo izay mahafehy ny fiteny ao amin'ny tambajotran'izy ireo mba hanome ny fandikan-teny. 4) Mety hanangona ny fitaovan'izy ireo miaraka ny fikambanana ara-poko mba hamokatra gazety antserasera amin'ny fitenin'ny vazimba teratany.
RV: Inona no tena mandrisika anao voalohany hiasa hahita ny fiteninao sy ny kolontsainao ho hita amin'ny aterineto?
JS: Ny manosika ahy voalohany dia ny hahafantatra fa manan-danja hatrany ny fahafantarana ahy amin'ny maha-olona vazimba teratany ahy na dia mandroso aza ny fotoana. Manantena aho amin'ny hoavy fa hahita ny kolontsaina sy fiteny vazimba teratany hiala amin'ny marika hoe “voarahona” na “tandindonin-doza”. Mety manontany ny sasany hoe nahoana, tsy azo ihodivirana izany, tsy ao anatin'ity vanim-potoana maoderina ity izany ary mila mandroso isika mba haharaka vanim-potoana. Ka izany indrindra, amin'ny fampiasana ny teknolojia isika afaka mitondra ny fiteny indizeny haharaka ny vanim-potoana. Tsy mila mijanona ao anaty kabinetra feno vovoka ny fiteny indizeny. Afaka mampiasa ny teknolojia isika mba hahitana ny fitenintsika sy ny kolontsaintsika anaty aterineto – ho an'ny taranaka tanora sy taloha sy ho an'ireo hafa mba hianatra ny fiteny ihany koa. Nataon'ireo vondrom-piarahamonina hafa taloha izany, na dia asa mafy sy mila fanolorantena mafy aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/21/152523/
 Borneo Research Institute for Indigenous Studies (BorIIS), : https://www.ums.edu.my/boriis/
 Tetikasa ho an'ireo Fiteny Tandindonin-doza momba ny Vaovao COVID-19 amin'ny Fiteny Indizeny, Tandindomin-doza sy zara raha hita: https://endangeredlanguagesproject.github.io/COVID-19/
 Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS): https://en.wikipedia.org/wiki/Expanded_Graded_Intergenerational_Disruption_Scale_(EGIDS)